Clam Elite, beddelka ANC waxaa iska leh Fresh´n Rebel | Wararka Gadget
Miguel Hernández | 10/06/2021 11:30 | General, Reviews
Joojinta buuqa firfircoon, ee sida fiican loo yaqaan ANC loo soo gaabiyay Ingiriisiga, waxay noqotay sheegasho soosaarayaasha alaabada maqalka oo maalinba maalinta ka dambeysa sii kordheysa, taas oo ku dhacday sii deynta cusub ee Fresh'n Rebel, oo ah shirkad aan halkan si joogto ah ugala soconay, sidaa darteed waxaan wuu seegi waayey ballanta.
Waxaan kuu soo bandhigeynaa Clam Elite cusub oo ka socda Fresh´n Rebel, headset-ka ANC iyo waxyaabo kale oo farsamo oo kadis ah. Nala joog oo soo hel wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato dhagaha dhagaha dhegaha badan ee Fresh'n Rebel.
2 Astaamaha farsamada iyo ismaamulka
3 Joojinta buuqa iyo qaababka
4 App Sound shaqsiyeed iyo tayada codka
Fresh´n Rebel wuxuu wali run ku yahay nuxurkiisa, midab ahaan iyo qalab ahaanba. Elite-yada 'Clam Elite' waxay raacaan iswaafajinta midabada, iyagoo ku bixinaya midabyo madow, caddaan iyo buluug ah. Si la mid ah, waxay leedahay taxane balaastik ah iyo gogol isugu eg bir. Si kastaba ha noqotee, tani uma muuqato inay dhaawaceyso dhismaha guud, oo dareemaya xoog iyo tayo. Iyada oo ay taasi jirto, mahad balaastigga ayaa lagu hagaajiyay xagga iftiinka. Elite-yada 'Clam Elite' kuma cusla isticmaalka joogtada ah ee khibradeena.
Waxaa ka mid ah naylo xarig ka jafay USB-C
Waxaa ku jira 3,5mm Jack dekedda iyo nayloolliyuhu xidheen AUX cable
Waxaa ku jira qaadista boorsada
Marooyinka madaxa ayaa laga sameeyaa dharka oo waxay ku leeyihiin lakabka xumbada xusuusta gudaha si ay u fududaato in la xidho. Sida iska cad waxaan leenahay nidaam telescopic caadi ah oo sameecadaha noocan ah si aan madaxa u dhigno. Dhinaceeda, sameecadaha dhagaha ee gebi ahaanba daboola dhegta waxay leeyihiin dabool maqaar siman ah, waxay ku wareegaan xorriyadda dhaqdhaqaaqa sidoo kalena waa la laaban karaa.
Qeybtaan waxaan ka helnay guddiga taabashada qalabka gargaarka maqalka, iyo sidoo kale badhanka firfircoonida / hawlgelinta ANC, badhanka ON / OFF iyo dekedda USB-C oo aan ku soo dalici doono qalabka. Wadarta culeyska waa 260 garaam oo keliya.
Astaamaha farsamada iyo ismaamulka
Sida iska cad, maadaama sameecadaha dhagaha aan laheyn ee ay yihiin, waxaan u heysanaa Bluetooth xiriirinta aaladda, in kastoo aan sidoo kale ka faa'iideysan karno astaamaha codkiisa shaqsi ahaaneed ee aan gadaal ka hadli doono Qeybtaan Clam Elite ee Fresh´n Rebel ayaa leh Joojinta Sawaxanka Dijitaalka ah, oo bixinaysa khibrad aragti ahaan ka sarraysa. Tan waxaa lagu kaabayaa qaabab taxane ah oo aan waliba gadaal ka hadli doonno.
Waxaan leenahay dekedda USB-C oo aan ka buuxin karno samaacadaha dhagaha iyo taas Waxay haystaan ​​40 saacadood oo ismaamul ah ah oo ku saabsan muusig loo maqlayo, taas oo loo dhimi doono 30 saacadood markii aan dhaqaajino buuq joojinta. Lacagta buuxda ee Clam Elite ee Fresh'n mucaaradka waxay nagu qaadaneysaa ugu yaraan afar saacadood, marka waxaan go'aansan karnaa inaanan haysan nooc lacag degdeg ah. Iyadoo ay taasi jirto, is-maamul waa mid aad u ballaaran oo aan si dhib leh u aragno xaalad aan u baahan karno. Si kastaba ha noqotee, Maaddaama aan haysanno dekedda 'Jack 3,5mm' waxaan u adeegsan karnaa hab dhaqameed haddii ay naga dhammaato is-maamul.
Joojinta buuqa iyo qaababka
Xaaladdan oo kale Fresh'n Mucaaradka ayaa go'aansaday in lagu hagaajiyo nooca 'Clam range' oo leh qaabkan "Elite" taasna waxay noo soo bandhigtay joojinta buuq dijitaal ah oo ballan qaadaya inuu gaaro illaa 36 dBi. Imtixaannadeennii waxay is tustay inay ku filan tahay, uguyaraan habka baajinta buuqa buuxa. Waxyaabaha ayaa isbeddelaya markaan u beddeleyno qaab kale.
Joojinta buuqa caadiga ah: Waxay joojin doontaa dhammaan qeylada leh awoodda ugu badan ee ay bixiso Clam Elite illaa 36 dbi
Qaabka Muuqaalka: Qaabkani wuxuu joojinayaa buuqa ugu dhibka badan ee soo noqnoqda laakiin wuxuu noo oggolaanayaa inaan ka soo qabsanno wadahadallada ama digniinta bannaanka.
Marka laga hadlayo Qaabka Muuqaalka waxaan arki karnaa sida ay si weyn u saameyn karto codadka muusikada aan dhageysaneyno. In kasta oo ay sifiican u istaagto, anigu ma jecli hababka 'hufan' noocan oo kale ah, joojinta buuqa firfircoon ayaa si fiican u shaqeeya, waxaanan kugula talinayaa inaad ku isticmaasho jawi aamin ah. Si kastaba ha noqotee, Iyadoo la tixgelinayo sida ay muftaaxlaha dhegahaagu caan u yihiin, xitaa waxaan haysannaa darajo fiican oo go'doomin ah marka aanan dhaqaajinaynin barnaamijkan softiweerka ah.
App Sound shaqsiyeed iyo tayada codka
Ellam-yada 'Ellam Elite' waxaa weheliya shaqeyn aan caadi aheyn oo ah in lagu habeeyo nooca codka iyada oo loo marayo codsi loo heli karo bilaash labadaba macruufka iyo Android. Mar alla markii aan isku dheelitirno Clam Elite-keena, waa wax iska fudud innagoo qabanayna badhanka ON / OFF, nidaam kala-hagaajin ayaa furmi doona kaasoo socon doona ugu yaraan saddex daqiiqo, waana wax caqli gal ah Marka su'aalaha la dhammeeyo, xog ayaa loo qoondeyn doonaa Clam Elite-keena oo aan lagu keydin doonin taleefanka laakiin dhagaha laftooda, in aan aqoonsan karno waxna ka beddeli karno markasta oo aan dooneyno iyada oo aan lumin goobtaas inta aan isticmaalno.
Taabo nidaamka guddi si aad u maamusho waxyaabaha ku jira warbaahinta iyo mugga
Ogaanshaha meelaynta si loogu joojiyo muusikada si toos ah
Dhinaceeda, tayada codku wax badan ayey ku kala duwan tahay haddaan tiradhayno iyo haddii kale. Xaaladdayda, waxaan dareemay joogitaanka xad-dhaafka ah ee baaska ka dib cabiridda, markaa waxaan doorbiday qaabka caadiga ah, aan dhahno waxay ku yimaaddaan si heer sare ah oo loo qaabeeyey heerka. Kama war qabno inay leeyihiin koodh aptX ah. Waxay naga siiyaan waxqabad wanaagsan basaska iyo dhexda, sida iska cad waxay ku silcayaan sarre, gaar ahaan haddii aan ka fogaano muusikada ganacsiga, sida dhacda badanaa sameecadaha dhagaha ee noocan ah. Daacadnimada dhawaqa ayaa waxyar naaqus ah markaan dhaqaajino hababka baajinta firfircoon, wax waliba ku dhaca xuduudaha caadiga ah.
Waxaan la kulannaa Jabhadan Fresh'n waa badeecad si wareegsan u wareegsan, xooggeeda ayaa ka muuqata kuwa daciifka ah, gaar ahaan sababtoo ah khibrada isku xirnaanta, habeynta iyo raaxada ayaa la jaan qaadaya tayada codka, taas oo inkasta oo aynaan ku jirin heer sare, waxay bixisaa heer sare oo ku filan dadka isticmaala. qanacsan Qiimaha bilaabista waa 199,99 euro meelaha caadiga ah ee iibka sida Amazon, El Corte Inglés iyo Fnac.
Ku dhejiyay: 10 Juunyo 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 9 Juunyo 2021
Qalabka si fiican looga fiirsaday iyo qaabeynta
Suurtagalnimada in lagu hagaajiyo codka barnaamijka
Xiriir wanaagsan iyo khibrad hawlgal
Habka Ambient waa la horumarin karaa
Waxay ku siin karaan dareen ah adkeyn yar iftiinka aawadiis
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Clam Elite, beddelaad leh ANC sharaf leh Fresh'n Rebel
Mataanaha ANC, Fresh´n Rebel waxay horumarinaysaa qaabkeedii guusha